ဒီနေ့သည် နှစ်တစ်နှစ်အကုန် ၊ နောက်တစ်နှစ်သို့ကူးပြောင်းမည့်နေ့ဖြစ်သည်။
သူဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။ သူဒီနေ့ဆေးခန်းပြရန် ဆရာဝန်နှင့်ချိန်းထားသည်။ ညနေမှပြရမည်ဖြစ်သည်။
ဒီနေ့အမတစ်ယောက်လဲ သူပြသည့်ဆေးရုံတွင် ဆေးခန်းပြစရာရှိ၍ ဆေးရုံကြီးတွင် သူ တွန်ကင် အစောကြီးသွားယူပေးသည်။ အွန်လိုင်းတွင် တွန်ကင်ပြည့်နေပြီဖြစ်သည်။ မနက်အစောကြီးသွားယူနိုင်ရင်တော့ နံပတ်ရပါသည်။
ခါတိုင်းမနက် ၉နာရီခွဲ ၊ ၁၀နာရီထိအိပ်ဖြစ်သည်။ ညဆိုရင် သူအမြဲနောက်ကျမှအိပ်ဖြစ်သည်။ သူအိပ်မပျော်ပါ။ မနက်က ၅နာရီ၁၅မိနစ်ထရမည်ဖြစ်၍ မနေ့ညတော့ ၁၂နာရီကိုအတင်းအိပ်ပစ်လိုက်သည်။ အတင်းအိပ်တိုင်းအိပ်နိုင်သည်လို့မထင်ပါနှင့်။ မနေ့ကလဲ အစောကြီးထထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကော်စကိုတွင် ပစ္စည်းသွားဝယ်စရာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူခရီးသွားစရာရှိသည်။ သူငယ်ချင်းမှာထားသောပစ္စည်းများသွားဝယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ပတ်သွားမဝယ်ရင်မမှီတော့။ သို့သော်သူ့တွင်ကတ်ပြားမရှိပါ။ ကတ်ပြားမရှိရင်ဝင်ခွင့်မရှိ။ ဦးလေးမှာ ကော်စကိုကတ်ရှိသည်။ ဦးလေးက အလုပ်တက်တော့ ဦးလေးအလုပ်နားတဲ့ရက်ဘဲသွားလို့ရသည်။
ဒီ၂ရက်တော်တော်အေးပါသည်။ ၈ဒီဂရီထိကျသည် ၊ မနေ့ကမိုးရွာသောကြောင့် စိမ့်ပြီးအေးသည်။ ဒီနေ့မိုးမရွာပါ ၊ သို့သော်လည်းအေးသည်။ ဒီနေ့၉ဒီဂရီပါ။
၂ရက်လောက်အိပ်ရေးမဝတော့ ၊ ဒီနေ့သူဘာဖြစ်သွားသလဲ။
ဆေးခန်းသွားပြပြီးပြန်လာတော့ ညနေ ၅ နာရီရှိပြီ။ အမှန်တော့ သူသွားလည်ချင်သေးသည်။ ဖိနပ်ပြတ်သွားသောကြောင့် အိမ်ကိုမအီမလယ်နှင့်ပြန်လာရသည်။ အဒေါ်က ဦးလေးခေါ်သောကုန်တိုက်ကို လိုက်သွားရမည်ဖြစ်၍အမှိုက်မပစ်နိုင်ပါ။ သူဖိနပ်ပြတ်နေတာနှင့်အတော်ပင်။ ရှိသမျှအိမ်ကအမှိုက်တွေအကုန်လွှတ်ပစ်မည်၊ရှိသမျှ ဖိနပ်အစုတ်တွေလွှတ်ပစ်လိုက်မည်။ ဒီနေ့ထီဆုကြီးထိုးထားသည်။အမှိုက်ကားက ည၆နာရီခွဲမှလာမည်။၅နာရီမှရောက်တော့အိမ်နားကကုန်တိုက်ကိုဝင်သည်။ ဖိနပ်ပြတ်နှင့်လျှောက်သွားကြည့်သည်။ အမှန်က သူ အိုဗာတင်းအေးအေးလေးသောက်ချင်သောကြောင့်သွားဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်တိုက်စမဝင်ထဲက တယ်လီဖုန်းရှာမတွေ့။ သူစိတ်ထင်တာ ဘတ်စကားပေါ်မှာကျန်ခဲ့ပြီ။ သူပြာသွားသည်။ အဒေါ်က အဲဒီဘတ်စကားနှင့်ဆက်လိုက်သွားပြီး ၈မှတ်တိုင်အရောက်တွင်ဆင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အဒေါ်ကိုဖုန်းဆက်ရန်အတွက် သူအိမ်ပြန်မှဖြစ်မည်။ ဖိနပ်ပြတ်ကြီးနှင့်ပြေးသည်။ ပြေးရင်းနှင့်သူသတိရသွားသည်။ ဖုန်းကို သူ့အိတ်၏ဘေးအိတ်တွင်သူထည့်ထားသည်ဘဲ။ နှိုက်ကြည့်လိုက်တော့ ဖုန်းက ရှိနေသည်။ သူပျော်သွားသည်။
ကုန်တိုက်ဆက်ပတ်သည်။ ဝေဖာ ၁ ဗူး ၊ အိုဗာတင်းတစ်ဗူးဝယ်ပြီး အဝတွင် ထီးရောင်းနေ၍ သူကြည့်လိုက်သည်။ ပေါ့ပြီးသယ်ရလွယ်ကူသောထီးများကို သူကြိုက်သည်။ တစ်ချောင်းဝယ်လိုက်သည်။ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလက်တွင်ဒီတိုင်းချိတ်ပြီးကိုင်လာသည်။ ပြီးတော့ အိမ်ပြန်ရန် စက်လှေကားနှင့်အပေါ်တက်သည်။ အပေါ်ရောက်တော့ သူလိုချင်သောအနွေးထည်ကို ထပ်သွားကြည့်သည်။ ဈေးထပ်ကျသွားသည်။ ဝယ်သင့်မဝယ်သင့် သူမသိ ၊ ကြိုက်တာတော့ အရမ်းကြိုက်သည်။ ဒီတလောအကုန်အကျတွေအရမ်းများသည်။ သွားသွားကြည့်တာတော့ ၅ခါလောက်ရှိပြီ။ သူ့မှာ ၂ ဖက်ဝတ်လို့ရသောအနွေးထည်မရှိပါ။ ၂ဖက်ဝတ်လို့ရသောအနွေးထည်ကို သူလိုချင်နေခဲ့မိတာကြာနေပြီဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံအိတ်ဘေးချပြီး အင်္ကျီကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်သည်။ ဈေးမေးသည်။ ဘယ်ရက်ထိလျှော့မလဲမေးသည်။ မနက်ဖြန် ထိဘဲလျှော့မည်တဲ့။ ပြီးတော့ သူထွက်သွားသည်။ အင်တာနက်အတွက်ဆောင်ရန် Bill ရောက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် သူ 7-11 မှာသွားဆောင်သည်။ ဆောင်မည်လုပ်တော့ သူ့လွယ်အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံအိတ်ကိုရှာသည်။ မတွေ့တော့ ၊ သူ တော်တော်ထူပူသွားသည်။ အထဲတွင် အင်တာနက်ဆောင်ရန် ပိုက်ဆံ ၊ ဆရာဝန်ပြရင် သုံးသောကတ် ၊ အရေးကြီးဆုံးက ပိုက်ဆံထုတ်သောကတ် ဒါတွေအကုန်လုံး အဲဒီပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ။ သူ ထီးဆိုင်ကိုပြေးသည်။ အောက်ကို တစ်ခါဆင်းရသည် ၊ လူတွေက တော်တော်များသည်။ တိုးဝှေ့ပြီး သွားရသည်။ တောင်းပန်ပါတယ် သွားခွင့်ပေးပါ အော်သွားရသည်။ ထီးဆိုင်ရောက်တော့ ပိုက်ဆံအိတ်ကမရှိ။ ခေါင်းထဲမှာ တော်တော်စဉ်းစားလိုက်မှအဖြေပေါ်သွားသည်။ အင်္ကျီကြည့်သည့်ဆိုင်တွင်ဖြစ်ရမည်။ အပေါ်ကိုပြန်ပြေးတက်ပြန်သည် ၊ ရမှရပါတော့မလားစိတ်ပူမိသည်။ အင်္ကျီဆိုင်ရောက်တော့ အင်္ကျီပေါ်မှာမရှိတော့။ ဆိုင်ကကောင်လေးကိုမေးကြည့်သည်။ သိမ်းထားပါတယ်တဲ့၊ တော်ပါသေးရဲ့။ ကျေးဇူးအထပ်ထပ်တင်မိသည်။ ဟတ်ပီးနယူးရီးယားပါပြောသည်။
ချမ်းစိမ့်နေသောရာသီဥတုက သူ့အတွက် နွေရာသီဖြစ်နေသည်။ ချွေးတွေ အသားကုန်ထွက်နေသည်။ အင်တာနက်ခဆောင်ပြီးအပြန် အပြင်ကလေအေးတိုက်တာတောင် သူအိုက်နေသေးသည်။
အိပ်ရေးမဝလို့လား ၊ အမှိုက် ၆နာရီခွဲသွန်ရမှာလောနေလား မသိ။ သူဒီနေ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းလေး ရိုက်ခဲ့သည်။
သတင်းကောင်းပြောပါမည် ၊ အမှိုက်တွေအကုန်သွန်ပြီး ရေချိုးပြီး ၉နာရီမှ ထမင်းစားဖြစ်သည်။ ထီဂဏန်းထွက်လာသည် ၊ မပေါက်ပါ။ :D ဒီနေ့ထိုးသောထီသည် ဈေးကြီးပါသည်။ ခါတိုင်းဈေးပေါတာဘဲထိုးသည်။ ဈေးကြီးသောထီသည် ပေါက်လျှင် ပိုက်ဆံအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အားလုံးသော ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေများ , ဘလော့လေးကိုလာရောက်အားပေးကြသောမိတ်ဆွေများ "ဟက်ပီးနယူးရီးယား ၂၀၁၃ မှာ တောင်းတဲ့ဆုတွေ အားလုံးပြည့်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်"
Posted by လရိပ်အိမ် at 11:57 PM9comments:
ထွက်ပေါက်ခွင့်လေး ............. ပေးပါ
ထွက်ပေါက်ခွင့်လေး ..... ပေးပါ။
Posted by လရိပ်အိမ် at 10:45 AM 12 comments:
ကိုယ့်အပေါ်ဒီလိုလုပ်ထားပေမဲ့ ကိုယ်က လူတစ်ယောက်ကို အပုတ်ချသလို ရေးထား ၊ သူ့ရဲ့အီးမေးကိုလဲ ကိုယ့်ဟာမှတ်ပြီး တင်လိုတင်(လူ့စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်နေသလို)ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် မတင်ချင်တော့လို့ပါ။(ဖတ်ပြီးသွားသောသူများ ၊ သူ့ကိုသံယောဇဉ်ရှိနေသေးတယ်လို့တော့ မထင်စေချင်ပါ)
ဒါကြောင့် ကိုဏီလင်းညို နဲ့အမေးအဖြေလုပ်ထားတာလေးရယ် ၊ ကဗျာလေးရယ် ကိုဘဲ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ ကွန်မန့်ပေးသွားသူများကိုလဲလေးစားတဲ့အနေနဲ့ကွန်မန့်တွေပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မေးသူက ဘလော့ဂါလရိပ်အိမ်ဖြစ်ပြီး ဖြေသူက သက်တံဆယ်စင်းမှဘလော့ဂါစာရေးဆရာကိုဏီလင်းညို ဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းနဲ့ မိတ်ဆွေ ဘာကွာလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါ။
သူငယ်ချင်းဆိုတာ... ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အတူတူ ယှဉ်တွဲကြီးပြင်းပြီး ရင်းနှီးခင်မင်ခဲ့တဲ့သူလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်...
မိတ်ဆွေကတော့ ကြီးမှ တွေ့ဆုံခင်မင်ကြတဲ့ သူမျိုးတွေလို့ ယူဆမိတယ်...
အဲ့ဒီတော့ ရင်းနှီးတဲ့ နက်ရှိုင်းမှုပမာဏတစ်ခုတော့ ကွာမယ်ထင်ပါတယ်...
ဒါဆို ဒီမိတ်ဆွေတွေကို သူငယ်ချင်းလိုပေါင်းလို့မရဘူးပေါ့ အဲလိုလား
ရင်းနှီးတဲ့ နက်ရှိုင်းမှုပမာဏတစ်ခုရောက်ရင် သူငယ်ချင်းလုပ်လို့ရပြီပေါ့ အဲလိုလား
သူတို့နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ အခြေအနေ၊ အတွေးခေါ်ယူဆပုံတွေ နည်းနည်း ကွာသွားတယ်...
ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ သူတို့ကို နေရာပေးနေမိဆဲပဲ
ကြီးမှတွေ့ဖြစ်ကြပေမယ့်လည်း... တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ၊ နားလည်မှုတွေ အားကောင်းလာတာနဲ့အမျှ၊ သူငယ်ချင်းတွေလို ခင်မင်လာနိုင်တာပဲလေ...
ပြောရင်းနဲ့ ရှုပ်ကုန်ပြီထင်တယ်... :D
ဟင့်အင်း မရှုပ်ပါဘူး။ သဘောပေါက်သွားပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုမေးချင်တယ်။ ဒီလိုမိတ်ဆွေတွေကို ကိုယ့်ဘက်က သူငယ်ချင်းလို သဘောထားပေမဲ့ သူ့ဘက်က မိတ်ဆွေလိုသဘောထားတော့ နားလည်မှုတွေလွဲတတ်တာပေါ့ ဟုတ်လား
ကိုယ့်အပေါ်မှာ မနက်ရှိုင်းတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ကိုယ်က သူငယ်ချင်းလို့ သဘောထားမိရင်... ထားမိတဲ့သူဟာ... စိတ်ပင်ပန်းရမှာ အမှန်ပါပဲ
လရိပ်ရေးထားတဲ့ ကဗျာ ပါ။
မမလရိပ်ရေ သေသေချာချာလေးဖတ်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်းမက်တာချင်းတူတယ်နော်။ တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးမမရယ်။ ရင်မှာလာငြိရင် ငြိတဲ့သူက ရှုံးတာမမရဲ့။ အနော်ကတော့ အမြဲတမ်းရှုံးနေတဲ့သူပေါ့။
သူငယ်ချင်း လို့သတ်မှတ်ရင်လည်းသူငယ်ချင်း
ပေါ့ ၊ သူဘယ်လိုပဲ ပြင်ပြင် ကိုယ်မပြင်ပဲ
မရေးတာ ကြာသွားလို့တွေးတာလည်း
ခုမှပဲ မိတ်ဆွေနဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာလေးခွဲခြားပြီးမြင်လိုက်ရတယ်
လရိပ်မှာလဲ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်း အဲလိုတွေရှိတာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကဒီလိုဘဲအောင့်အီးသည်းညည်းခံပြီးပေါင်းတယ်။ ကိုယ့်ကိုလာကြောတာသိရက်နဲ့ပေါင်းတာ။ အခင်အမင်မပျက်ချင်လို့လေ။
ခုက အဲလိုမဟုတ်ဘူးလေ ၊ လရိပ်ကမိန်းကလေး ၊ သူက ယောက်ကျားလေးလေ။ ကိုယ်ကသူငယ်ချင်းလိုဘဲဆက်ဆံတာ ၊ သူ့ဘက်က သူငယ်ချင်းလိုလဲမဆက်ဆံ၊မိတ်ဆွေလိုလဲ မဆက်ဆံတော့ လရိပ်ကခံစားတတ်တဲ့သူဆိုတော့ ဒီလိုအပြုအမူမျိုးတွေ လရိပ်မခံစားနိုင်ဘူး။ လရိပ်က စာရေးဆရာမဟုတ်သေးတော့စာရေးဆရာလိုတော့ မရေးတတ်တာအမှန်ပါ။ လရိပ်ဝတ္ထုရေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။လေဘယ်မှာလဲ ဝတ္ထုလို့မတပ်ထားပါဘူး။ လရိပ်ရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကို ဒိုင်ယာရီအနေနဲ့ဘဲရေးတာပါ။ စာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲ အင်တာနတ်မှာ ပေါ်တင်ရေးတဲ့အတွက် ယောက်ကျားလေးတွေဘက်ကကြည့်ရင် ဒီကိစ္စဟာမရေးသင့်ဘူးလို့ထင်ကြမှာအမှန်ဘဲ။
"သူဘယ်လိုပဲ ပြင်ပြင် ကိုယ်မပြင်ပဲ အခင်အမင်မပျက်နေလို့ ရမယ်ထင်တာပဲ။" လို့မိန်းကလေးဘက်က(ညီမလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့) မခံစားပေးနိုင်ဘဲနဲ့ပြောဖို့မသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်က သူငယ်ချင်းလိုဘဲ ဆက်ဆံပေမဲ့ သူ့ဘက်က သူ့ကိုလိုက်နေတယ်လို့ထင်မှာ အမှန်ပါဘဲ။ လရိပ်မကြိုက်တဲ့ယောက်ကျားလေးတစ်ယောက်(ဆရာဝန်)ကို အဲဒီဆရာဝန်က အဲလိုအနေနဲ့ထင်ရင် လရိပ်သိက္ခာကျတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လရိပ်ဘက်က သူ့ကို သူငယ်ချင်းအနေနဲ့စွန့်လွှတ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် ပိုခင်တဲ့သူက ပိုခံစားရတာပဲ.. အဲဒါကိုမှ ခံစားဝမ်းနည်းတတ်တဲ့သူက ပိုခံစားရတာပေါ့ . လရိပ်ရဲ့ ခံစားချက်တွေအားလုံးကို နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်..။ပျော်ရွှင်ပါစေ ..
အကူအညီလိုအပ်ချိန်မှာ အဆင်သင့် ရှိနေပေးသူ ...
မသတ်မှတ်ပဲ ကူညီပေးသူ ...
ကိုယ့်အကျိုးကို အမြဲလိုလားတတ်သူ ...
မိမိကွယ်ရာမှာ ဖြစ်စေ ဘယ်သောအခါမှ
ကိုယ့်မကောင်းကြောင်း မပြောတတ်သူ ... ဟာ
ကျွန်တော် အကြမ်းဖျင်း မှတ်သားဖူးပါတယ် ။
ထာဝရ ရရှိ ပိုင်ဆိုင်နိူင်ပါစေ ညီမလေး ။
သူငယ်ချင်းနဲ့ မိတ်ဆွေဆိုတာကို ခွဲခြားပေးတဲ့ ပို့ကောင်းလေးဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ လရိပ်ရေ
လမင်းလည်းသူငယ်ချင်းအရမ်းခင်တတ်တာ ငယ်ငယ်ကဆိုသူငယ်ချင်းတွေကျောင်းပြောင်းရင်လိုက်ပြောင်းတတ်တယ် ငိုရတယ် တစ်ခုတော့ရှိတယ် လမင်းအကျင့်ပေါ့ အရမ်းခင်တတ်တယ် ကိုယ်ကိုမခင်ရင်လည်းလမင်းက မခင်တော့အောင်နေတယ်..
လရိပ်ခံစားချက်လေးသေချာဖတ်သွားတယ် သူငယ်ချင်းကောင်းနဲ့ ဆုံစည်းနိုင်ပါစေ
Posted by လရိပ်အိမ် at 3:41 PM 8 comments:
Labels: ရင်တွင်းဖြစ်ကဗျာများ, ရောသမမွှေ
I Miss U လို့
Posted by လရိပ်အိမ် at 1:17 AM 12 comments:
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဆရာဝန်ပါ။ သူက မနှစ်တည်းကလာတာပါ။
သူငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့ မြန်မာမှာ တခါဘဲတွေ့ဖူးတာပါ။ အမေရဲ့သူငယ်ချင်းက မိတ်ဆက်ပေးတာပါ။
လရိပ်ညီမဝမ်းကွဲလေးနဲ့နေတဲ့မြို့တူပါတယ်။ အိမ်နီးပါတယ်။ သူတို့က ညကျောင်းတက်တော့ ကိုယ့်ထပ်ပိုရင်းနှီးခင်မင်ပါတယ်။
လရိပ်ကအဲဒီမြို့နယ်မှာနေချင်တာ ၊ ဟိုးအထက်တန်းကျောင်းမတက်ခင်တည်းက။ အဲဒီအထက်တန်းကျောင်းကအဲမှာမဟုတ်ဘူး။ လရိပ်က အဲဒီမြို့နယ်ကညဈေးနားမှာ အိမ်ငှါးနေချင်တာ၊ခုတော့ အလုပ်မလုပ်နိုင်လို့ပိုက်ဆံမရှိလို့ဦးလေးအိမ်မှာလာနေတာ။ သူတို့နဲ့မြို့နယ်တူဘူး။
လရိပ်ဆေးရုံတက်ရ နေမကောင်းဖြစ်နေတာနဲ့တလောကမှ တွေ့ဖြစ်တာပါ။
ဒီမြို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာသူ တနှစ် ဟောက်(စ) ဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လရိပ်နဲ့နေ့လည်တည်းကချိန်းထားတာ ၊ သူကျောင်းပြန်ရင် အွန်လိုင်းမှာတွေ့မယ်ဆိုပြီး ညီမဝမ်းကွဲနဲ့ညဈေးလိုက်သွားတယ်။
ဖုန်းဆက်တော့ သူမဟုတ်ဘူး၊ သူ့အဖေဖြစ်နေတယ်။ စစ်ဆေးမေးမြန်းနေတာနဲ့။ နေမကောင်းတော့ အသံကဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး။ အဲဒါသူ့အဖေက ဘာသံလဲတဲ့။ ဘာပြောတာလဲ ၊ ဘယ်သူလဲနဲ့ စုံသွားတာဘဲ။
အဲဒါနဲ့ ညီမဆီဆက်ကြည့်တော့ ညဈေးသွားတာတဲ့ ၊ သူဖုန်းကျန်ခဲ့လို့တဲ့။
စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်။ လရိပ်နဲ့အရင်ချိန်းထားတာလေ။ ဘာဖြစ်လို့အဲလိုလုပ်တာလဲ။
တနင်္ဂနွေက လရိပ်ရယ်၊ သူရယ်၊ ညီမဝမ်းကွဲ၂ယောက်ရယ်၊ ညီမဝမ်းကွဲ ၂ယောက်ထဲက သူနဲ့နဲနဲဘဲခင်တဲ့ညီမဝမ်းကွဲတယောက်ရဲ့သူငယ်ချင်းမြေပဲမတယောက်ရယ် ရှော့ပင်းသွားကြတာ။
သူနဲ့ခင်တဲ့ညီမလေးက ၁နာရီခွဲချိန်းတာ။ ဒါပေမဲ့ လရိပ်က မြေအောက်ရထားကိုသွားတဲ့ကားအလကားရလို့မြေအောက်ရထားစီးပြီးလာတာ ပိုစောရောက်တယ်။ ၁နာရီ၁၀မိနစ်ဆိုရောက်ပြီ။
သူတို့၃ယောက်က ၂နာရီမှရောက်တယ်။ အဲဒါ သူနဲ့ခင်တဲ့ညီမလေးကို ဆူတယ်ဗျာ။
ခု သူကျတော့ဘာထူးတုန်း၊ ၉နာရီခွဲကျောင်းဆင်းတာ ၊ ၁၁နာရီခွဲခါနီးမှရောက်လာပြီးစကားလာပြောတယ်။ အိမ်နဲ့ကျောင်းနဲ့နီးနီးလေးကို။ ညဈေးသွားကြတာလေ။
ဒီမှာကဝမ်းနဲလို့မပြီးသေးဘူး။ ၁၂နာရီခွဲတော့ သူအိပ်ချင်ပြီတဲ့။ နေ့လည်ထဲက ချိန်းတာ ကွန်ပြူတာမအားဘူးတဲ့။ လရိပ်လဲစောင့်လိုက်တာ မွန်းကြပ်လာလို့အပြင်ထွက်သွားတယ်။
သူတက်လာရင်ကိုယ်မရှိတော့မကောင်းမှာစိုးလို့ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်။ အွန်လိုင်းမတက်လာနဲ့တော့လို့၊အပြင်ရောက်သွားပြီလို့။ သူက ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့။
လရိပ်က ဖုန်းထဲမှာမပြောချင်ဘူးလို့၊ ငိုလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ သူဘဲပြောတာ ကျောင်းဆင်းရင် အွန်လိုင်းတက်ခဲ့မယ်တဲ့။
ပြီးတော့ လရိပ် နေမကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ မအိပ်နိုင်တာ ၂ရက်ရှိပါပြီ။ အိပ်ချင်တယ် ၊ အိပ်လို့မရတာ။
ရင်တုန်ပြီးတော့ တော်တော်မောတယ်လို့ ခံစားနေရပါတယ်။ (mitral valve prolapse) ပါ။
ဆရာဝန်သွားပြရင်ကောင်းမလားလို့ထလာပြီး အွန်လိုင်းတွန်ကင်လာယူတာ။ ယူမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ မနက်မှ တွန်ကင်ယူကြည့်လိုက်အုန်းမယ်။
လရိပ်သိသလောက်ပေါ့လေ ... ညီမဝမ်းကွဲခေါ်တဲ့နေရာတိုင်း သူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းက ညီမလေးနားမလည်တဲ့စာတွေရှင်းပေးတယ်။
ခုလရိပ်က နက်ဖန် တနင်္ဂနွေတုန်းကသွားတဲ့နေရာသွားမယ် ၊ တယောက်ထဲသွားမှာလဲ သူသိတယ်။ သူဒီတလောအရမ်းအလုပ်များနေပါတယ်တဲ့။
သူကကူညီချင်ပါတယ်တဲ့။ လရိပ်က သူ့ကိုမခေါ်သွားချင်ပါဘူး။ ရှော့ပင်းဆိုတာ ယောက်ကျားလေးတွေ အမုန်းဆုံးနေရာမဟုတ်လား။ ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။
ရှော့ပင်းတော့မကြိုက်ဘူး။ ဒါမဲ့ ညဈေးကိုတော့ သူကပစ္စည်းတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးအထပ်ထပ်အခါခါပြောသွားတယ်။ သူအဲလိုပြောလိုက်မှ ဆေး၂ခါ ဆက်သောက်ဖြစ်သွားတာ။
ဆေးမသောက်တာကြာသွားပြီမို့ ခုပြန်သောက်နေပါတယ်။ ခုဘဲ သောက်တာ ၂ခါဆက်တိုက်ရှိပြီ။
မနက်ကောင်းသွားရင်တော့ သွားမပြတော့ဘူး။ နောက်အပတ်စောင့်ကြည့်လိုက်အုန်းမယ်။
Posted by လရိပ်အိမ် at 4:38 AM 10 comments:
ဘဝ ပင်ပန်း ကြမ်းတမ်းလွန်းတော့
မျက်ရည်တွေဝဲပြီး ကောင်းကင်ကို ငေးမော့ကြည့်နေမိတယ်
Posted by လရိပ်အိမ် at 9:23 PM 10 comments:
ငါ့ကို block လုပ်ထားကြတယ်
ရင်ထဲက အစိုင်အခဲလေးကို ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
Posted by လရိပ်အိမ် at 7:46 PM 22 comments:
ရက်စက်တဲ့ ..... လောက
Posted by လရိပ်အိမ် at 1:39 PM9comments:
GLAUCOMA (ချင်းကွမ်းရန် 青光眼)
ဒီရောဂါကို မြန်မာပြည်မှာ သိတောင်မသိဘူး ၊ ကြားလဲမကြားဖူးဘူး။ မျက်လုံးထဲက ဖိအားများလို့ ဖြစ်တဲ့ရောဂါတဲ့။ ဖိအားများတိုင်း အဲဒီရောဂါဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာလို့ ပြောကြတာဘဲ။ အားလုံးသိအောင်လို့ ပြောပြတာပါ။ သိပ်တော့မသိဘူး။ မှားသွားရင်လဲပြန်ပြောကြနော်။
၂၀၀၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလောက်ထဲကမျက်လုံးက၁မျိုးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ မျက်လုံးထဲကအောင့်တာလား ၊ ညောင်းတာလား ၊ ကိုက်တာလား မသိဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကမျက်မှန်တတ်တော့ ပါဝါများတက်လားမသိဘူးလို့ တော့ထင်လိုက်တယ်။ အလုပ်လုပ်နေတာဆိုတော့ ကွန်ပြူတာကိုနေ့ မအားညမအား ကြည့်ဖြစ်နေတာကြောင့်လား ဆိုပြီး လားပေါင်းများစွာနဲ့ ဒီတိုင်းဘဲနေလိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်က အလုပ်တွေတအားများတော့ မျက်မှန်ပါဝါဆိုင်ကို အားမှဘဲသွားမယ်လို့ စိတ်ကူးတာပေါ့။ ဒီလိုဖြစ်နေရင်းနဲ့ မေလရောက်တော့ မျက်လုံးမှာ အပူဖုလေးပေါက်ရော ၊ မျက်လုံးနာတာပေါ့။ အဲဒါသွားမပြဘဲ အိမ်မှာရှိတဲ့ တတ်ထရာဆိုင်ကလင်းဘဲအားကိုးလိုက်တယ်။ မပျောက်ဘူး။
မပျောက်တော့ အိမ်နားမှာ မျက်လုံးပြလို့ရတဲ့ဆေးခန်း၁ခုရှိတယ်။ အဲကိုပြေးတာပေါ့။ အဲဒီရောက်တော့ မျက်လုံးကိုစက်တွေနဲ့ စမ်းသပ်တယ်။ အဲဒီမှာ မျက်လုံးကို ဖိအားတိုင်းတဲ့ကိရိယာလေးလဲရှိတယ်။ တိုင်းတော့ ဖိအားက ဘယ်ဘက် ၄၈ ၊ ညာဘက် ၄၆ တဲ့။ ဆရာဝန်မြင်ပြီးလန့် သွားတယ်။ အဲလောက်များတယ်ပေါ့။ မကောင်းဘူးတဲ့။ လူသာမန်တစ်ယောက် မျက်လုံးဖိအားက ၂၀ အတွင်းမှာဘဲရှိရမယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ နောက်၁ပတ်ရောက်ရင် လာချိန်ကြည့်နော်တဲ့ ဆိုပြီး မျက်လုံးနာနေတာကို ပျောက်အောင်ဆေးပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်ကခပ်ပေါ့ပေါ့ဘဲ။ အဒေါ်လဲပါတယ်။ အဒေါ်က စိတ်တော့ပူနေတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ အမေကိုပြောပြတယ်။ ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့.။ အဒေါ်က အမေကိုပြောပြတယ်။ ဒီလိုဖိအားများရင် ရောဂါ၁မျိုးရှိတယ်တဲ့ ၊ GLAUCOMA (ချင်းကွမ်းရန် 青光眼) အဲဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့။ အဲဒါနဲ့ နောက်၁ပတ်တောင်မပြည့်ဘူး။ ထပ်သွားချိန်လိုက်တယ်။
ဖိအားက ဒီအတိုင်းဘဲမပြောင်းဘူး။ အဲဒါနဲ့ ဆရာဝန်လဲ အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီး ဆေးရုံကြီးကိုလွှဲလိုက်တယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ ၁ရက်လုံးစက်တွေအများကြီးနဲ့ စစ်ဆေးခံရတယ်။ နောက်တစ်ရက်မှ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ ရတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးကစမ်းလဲပြီးရော ၊ အရေးကြီးတယ်။ နောက်၂လနောက်ကျရင် မျက်လုံးကန်းနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ချင်းကွမ်းရန် 青光眼 （Glaucoma) ဖြစ်နေတာလို့ ပြောပါတယ်။ မျက်လုံးဖိအားကျအောင်လို့ သောက်ဆေး၂မျိုးပေးတယ်။ မျက်စဉ်းဆေး၂မျိုးပေးတယ်။ အချိန်အတိကျထဲ့ခိုင်း ၊ သောက်ခိုင်းပါတယ်။ အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့လဲပြောလိုက်တယ်။ နောက်တစ်ရက်လာပြခိုင်းတယ်။ ဆေးသောက်ပြီး ဖိအားပြန်တိုင်းမယ်ပေါ့။ အဲဒီဆေးကသောက်ပြီး အရမ်းနေရခက်တယ်။ လူတကိုယ်လုံး ထုံနေတယ်။
နောက်တစ်ရက်ပြန်သွားပြတော့ ဖိအားက သိသိသာသာ ကျသွားတယ်။ ဘယ်ဘက် ၂၀ ၊ ညာဘက် ၁၆ ဘဲ ကျန်တော့တယ်။ အဲဒီတုန်းက စင်ကာပူကကျောင်းတက်ဖို့ စာကလဲရောက်နေတော့ လူ၁ယောက်လုံး ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။
အဲဒါနဲ့ ဆရာဝန်က သောက်ဆေးရပ်ပြီး မျက်စဉ်းဘဲခပ်ခိုင်းတော့တယ်။ နောက်၁ပတ်ထပ်ချိန်းလိုက်တယ်။ နောက်၁ပတ်မှ ဆရာဝန်ကိုမေးရမှာပေါ့ ၊ စင်ကာပူသွားလို့ ရမရကို။ နောက်တစ်ပတ်ရောက်တော့ ဆရာဝန်ကိုမေးပါတယ်။ စင်ကာပူမှာစာသွားဖတ်လို့ ရမလားပေါ့။ ဆရာဝန်ကရပါတယ်တဲ့ ၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မျက်လုံးကတော့ ပုံမှန် စစ်ဆေးနေရမှာပေါ့လေ။ မျက်စဉ်းလဲအမြဲခပ်နေရမှာပါတဲ့။ အဲဒီလိုနဲ့ စင်ကာပူကျောင်းကို တစ်ပတ်နောက်ကျပြီးတက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရောဂါက လူကြီးတွေမှာ အဖြစ်များတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မျိုးရိုးရှိရင်လဲဖြစ်တတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျိုးရိုးမရှိလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ရောဂါဖြစ်ရင် ဘာမှသိသာ ခံစားမှုမရှိဘူးတဲ့။ အဲဒါကြောင့်အသိနောက်ကျပြီး မျက်လုံးကန်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အားလုံးဘဲ မျက်လုံးဖိအား နဲ့ မျက်လုံး စမ်းသပ်ခြင်း ကို တစ်နှစ်တစ်ခါလုပ်ဖို့ အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
ခုတော့တော်တော်ကောင်းနေပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ ၃လတစ်ခါ ပုံမှန်စစ်ဆေးပါတယ်။ အမြဲစစ်တိုင်း မျက်လုံးဖိအား ၂၀ နဲ့ ၂၃ ကြားမှာဘဲရှိပါတော့တယ်။ ခုထက်ထိလဲ မျက်စဉ်းဆေးထည့်နေရတုန်းပါဘဲ။
# ခုဆေးထိုးခံနေရတာတော့ ဒါနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။
လရိပ်အိမ်က ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းပါဘူး။
အရင်က တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ post လေးပါ။ ဘလော့ပျက်သွားလို့ပါ။
ဒါကတော့ GLAUCOMA အကြောင်းပါ။ သိချင်တဲ့သူများ သိရအောင်ပါ။
1. ထောင့်ကျယ် ရေတိမ် (Open-Angle Glaucoma)
2. ထောင့်ကျဉ်း ရေတိမ် (Closed-Angle Glaucoma)
http://health.ngoinmyanmar.org/2009/08/glaucoma.html မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by လရိပ်အိမ် at 6:18 PM9comments:
သစ်ပင် ၊ မြက်ခင်းပြင်တွေရှိတယ်။
Posted by လရိပ်အိမ် at 12:59 PM 12 comments:
နွေဦးသုန်ရဲ့ ပထမဆုံးရည်းစားနဲ့ လွဲခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါ........ ကောင်မလေးကတောင်ကြီးသူလေ..
ဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျ...တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်မှာစပီးသိကြတာ.....ဒီလိုနဲ့ ရည်းစားတွေဖြစ်ကြပီးမကြာခင်မှာ...ရှင်းမရတဲ့ ပြသနာကြောင့်လွဲရတဲ့ အဖြစ်ပါ...ကျွန်တော်ရေးမိတဲ့..
သူနဲ့ ကျွန်တော် လျှောက်လည်ကြတော့...သူ ကလက်အိပ်ဝတ်မထားဘူးလေ....ကျွန်တော်လည်းလက်အိပ်ဝယ်ပြီး...လက်ဆောင်ပေးဖို့ စဉ်းစားမိတယ်...ဘယ်မှာ ၀ယ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး...သူ့ ညီမလေးကလည်း...သူငယ်ချင်းအတွက်လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဝယ်စရာ...
ရှိတယ်တဲ့.....ဒါနဲ့ ပဲ...နှစ်ယောက်သားဈေးကိုလာကြတယ်...ဆိုင်ရောက်တော့. ..သူ့ ညီမလေးက..
under wear ၀ယ်တယ်...ကျွန်တော်က..သူ့ အတွက်..လက်အိပ်ဝယ်တယ်...အရောင်းစာရေးမလေးက
packing ကိုတရောင်တည်း၊တရွယ်တည်းထုပ်လိုက်တယ်လေ...ကျွန်တော်လည်း ...ပြန်မစစ်တော့ဘူးလေ....ပီးတော့ကိုယ့် ချစ်သူကိုအံ့အားသင့်စေချင်တော့....သူ့ ညီမနဲ့ ထည့်မပေးပဲ..
ချစ်ရဲ့ ညီမလေးကပြောတယ်ကြယ်သီးပါတာကချွတ်ရစွတ်ရမကောင်းဘူးတဲ့ ...
ဒါပဲနော်..သောကြာနေ့ကိုနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကိုနမ်းဖို့ဝတ်လာခဲ့နော် .......
မှတ်ချက်။ ။အနားသတ်မှာအမွှေးဖွားဖွားလေးတွေပါတာဝယ်အုံးမလို့ 
ဟီးဟီး...ဒါပဲနော် ၀တ်လာခဲ့ ဖက်ကိုနမ်းအုံးမှာ။
အော်....ပြောဖို့ မေ့နေလို့ ဗျို့... သူ့ ညီမလေးကသူ့ သူငယ်ချင်းကိုပေးမယ့်လက်ဆောင်ထုပ်နဲ့ မှားသွား.
PS: အရင်က ခင်မင်ခဲ့ဖူးသော အကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးပါ
Posted by လရိပ်အိမ် at 5:01 PM 10 comments:
ရက်တွေကို ဒလိမ့်တုံးနဲ့ကြိတ်ပစ်ချင်သူပါး-)
Posted by လရိပ်အိမ် at 5:43 PM7comments:
Posted by လရိပ်အိမ် at 10:31 AM 8 comments:
Posted by လရိပ်အိမ် at 1:19 PM7comments:
Posted by လရိပ်အိမ် at 12:53 PM 10 comments:
Posted by လရိပ်အိမ် at 7:19 PM 14 comments:
ဘယ်ကိုပြေးရမလဲ။ လိုက်နှောင့်ယှက်နေတယ်။ ဘယ်နေရာကိုမှ ပြေးလို့မလွတ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲမှာနေလို့မဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေမှာ ဘယ်အခန်းကိုပြေးမလဲ။ ဘယ်အခန်းမှမပြေးနဲ့ ၊ မလွတ်ဘူး။ တစ်အိမ်လုံးအနှံ့ကြားနေရတဲ့ အသံကြောင့် လူက အပြင်မထွက်ချင်လဲထွက်ရပေဦးတော့ဘဲ။ အသံ တိတ်ဆိတ်နေရင် လူကိုခြောက်လှန့်စေပေမဲ့ သိပ်ကျယ်တဲ့အခါ လူကိုအနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်လားလို့မေးမယ်ဆိုရင် မဆိုင်းမတွနဲ့ဘဲဖြေမယ် ၊ သိပ်ဖြစ်စေနိုင်တာပေါ့ကွယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အသံနဲ့ဘဲလူက တော်တော်လုံလောက်နေပြီ။
ကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲမှာ ဘာလို့နေလို့မဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင် ကိုယ်နေတဲ့လေးထောင့်အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ Amplifier လို့ခေါ်တဲ့အသံချဲ့စက် ၁လုံး ရှိတယ်။ စပီကာ၎လုံးချိတ်ထားတယ်။ တီဗီ၁လုံးရှိတယ်။ ကွန်ပြူတာအင်တာနတ်က အဲဒီအခန်းထဲမှာချိတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ တီဗီကော ၊ အသံချဲ့စက်ကောရှိတာ ဟန်ကျလိုက်တာလို့တွေးထင်ရင်မှားပြီ။ သင်တို့ရုပ်ရှင်ရုံ ရောက်ဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီအသံအတိုင်းပါဘဲ ၊ အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ အသံတွေဝုန်းဒိုင်းကျဲနေတာ။ တစ်နေ့ထဲမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ၊ တစ်ရက်မှမနားဘူး။
တစ်ချို့က အသံတွေဆူညံနေမှကြိုက်တယ် ၊ တစ်ချို့ကျတော့ အသံတွေတိတ်ဆိတ်နေမှကြိုက်တယ်။ ကိုယ်က အသံဆူညံတာမကြိုက်တော့ စဉ်းစားကြည့်တယ်။အသံဆူညံတာကြိုက်တဲ့လူက တစ်နေကုန် ဆူညံနေရင်ကော ခံနိုင်ပါ့မလား။ ခံနိုင်မယ်ထင်တယ်။ သိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးကြည့်စရာလိုမယ်မထင်ဘူး။ အိမ်က ဦးလေးနဲ့ဘဲ တော်တော်ပြည့်စုံနေပြီ။ ဦးလေးလို လူမျိုးလဲ အများကြီးရှိမှာပါ။
ဦးလေးက အသံနဲ့ပတ်သက်ရင် ဘယ်တော့မှတိုးတိုး နားထောင်တာမရှိဘူး။ အမြဲအကျယ်ကြီး ၊ ရုပ်ရှင်ရုံလဲဘယ်တော့မှမသွားဘူး။ အသံချဲ့စက်တွေကို စိတ်ဝင်စားတာ ထင်တယ်နော်။ ယောက်ကျားလေးတော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တယ်။ အသံချဲ့စက်ပါရင် အသံကပိုနားထောင်ကောင်းတာ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံလိုမျိုး မဖွင့်ရင်မရဘူးလားဟင်။ မရဘူးတဲ့။ အဲလိုအသံအကျယ်ကြီးမှ ကြည့်လို့ကောင်းတာတဲ့ဗျာ။
ဪ... ဒါဆို တီဗီပိတ်လိုက်ရင် အသံတွေမကြားရတော့ဘူးလေ ၊ ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ။ နောက်ဖေးထမင်းစားခန်းထဲမှာ ရေဒီယိုတစ်လုံးက ဆယ်နှစ်ရာသီမပြတ် နေရာယူထားသေးတယ်။ ကိုယ့်အခန်းက ထမင်းစားခန်းနဲ့ကပ်ရပ်ပါ။ အသံကတော့ တိုးတိုးလေးလား ၊ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အသံအကျယ်ကြီးကြိုက်တဲ့ဦးလေးဘဲ ၊ အသံအမြင့်ဆုံးလှည့်ထားတယ်။ အဲဒီရေဒီယိုဟာ နေ့လည်၁၂နာရီကစလို့ မနက်၅နာရီထိ အလုပ်လုပ်ရရှာတယ်။ တစ်ချက်ကလေးမှနားရင် မကြိုက်တဲ့ဦးလေးပါ။ အသံတွေကြားနေရမှ စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါရဲ့။
ဪ... ဒီလောက်တင်ဘဲလား ၊ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့အိပ်ခန်းလေးထဲမှာလဲ နေ့လည်၁၂နာရီကနေ မနက်၅နာရီထိ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ရေဒီယိုတစ်လုံးရှိပါသေးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ကူးပေါက်ရင် အဒေါ်အခန်းထဲက တစ်လုံးကိုပါ ဖွင့်ထားလိုက်သေးတယ်။ တစ်အိမ်လုံးပြေးစရာနေရာမရှိတာ ဒါမျိုးပါဘဲ။ ဘယ်ဘဝက ဝဋ်ကြွေးလဲကွယ်။
ဪ ဒါဘာရှိအုံးမှာလဲ။ အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းထဲတွင် ဓတ်စက်အမြောက်အမြားနှင့်အသံချဲ့စက်များစွာရှိသည်။ ဆောင်းဘောက်ကြီးဘဲ အလုံး၂၀တိတိရှိသည်။ တီဗီတစ်လုံးရှိသည်။ Home cinema လို စက်တစ်လုံးရှိသည်။ ရုပ်ရှင်ရုံကဲ့သို့ ပြသနိုင်သည်။ ရုပ်ရှင်ရုံလောက်တော့မကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်ကြီးပါတယ်။ အဲဒီလောက် စက်တွေအများကြီးဝယ်ထားတာ စက်မပျက်အောင်လဲ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရဦးမည်ဟု ကြွေးကြော်ပြီးသကာလ။ တစ်ပတ်တစ်ခါ သူ့ရဲ့စက်ဖွင့်ရက်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲလိုနေ့မျိုးဆို တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်တယ်။ အိမ်မှာနေရင် ရူးသွားမှာစိုးလို့ပါ။ စက်ဖွင့်ရက်ဆို သိပ်စိတ်ညစ်တယ်။ ပြောရင်းတောင်ငိုချင်တယ်။ ဘာတွေဖွင့်လဲ သိချင်လား? James Bond ခွေ တစ်မျိုးဘဲဖွင့်တာ။ အဲဒီခွေဘဲ ဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူး။ James Bond တောင်မှ သူ့ရဲ့စံချိန်နဲ့ကိုက်ညီမှ ဖွင့်တာ။ အပတ်တိုင်းဒီခွေကြီးဘဲ ပြနေတာ တစ်ခြားခွေလေး မဖွင့်ဘူးလားလို့ မေးတော့ အဲဒီခွေရဲ့အသံက အစုံပါတယ်တဲ့၊ နားမလည်ပါဘူး။ ကိုယ်ဆိုရင် စက်လဲစမ်းမနေတော့ပါဘူး ၊ ကြည့်ချင်တဲ့အချိန်မှဘဲ ဖွင့်ကြည့်မယ်လေ။ အဲဒီ စက်စမ်းရင် ဖွင့်တဲ့အသံက အိမ်ကနေ ဟိုးလမ်းထိပ်လောက်ကြားရတယ်။ အိမ်နီးချင်းကလဲ ဘာမှမပြောဘူး။ အံ့ဩကုန်နိုင်ဖွယ်။ ဒီ စက်တစ်လုံးဘဲ စမ်းတာမဟုတ်။ အဒေါ်အခန်းထဲမှာ ကက်စက်ကြီးကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ အဲဒါလဲ တစ်ခါထဲ ဖွင့်တယ်။ ဘာသီချင်းလဲဆိုတော့ ကုလားသီချင်း။ အားးး ဆူညံနေတာဘဲ။ မနက် ၁၁နာရီက ဖွင့်လိုက်တာ ညနေ ၅ နာရီမှရပ်သွားတော့တယ်။ တကယ် အရမ်းစိတ်ညစ်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အိမ်ရှင်ကဘဲ အနိုင်ယူရမှာပေါ့။ လူကြီးတွေက တကယ်ဘဲ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာဘဲသိတယ်။ အဘွားဆို မဲ့ကာရွဲ့ ကာနဲ့ ။ ကိုယ်ကဘဲ တစိတ်ကို တစ်အိတ်လုပ်နေတယ်လို့ ထင်နေတာ။ ကိုယ့်ကြောင့်ဘဲ ရုပ်ရှင် မကြည့်ရသလိုလိုနဲ့ သိပ်မကျေနပ်ဘူးထင်ပါ့။ တိုးတိုးလေးကြည့်ရင် ရပါတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒါမှ ကြည့်ရလို့ နဲနဲကျေနပ်သွားတယ်။ ခုဆိုရင် နားပိတ်( အသံဆူညံမှုကို ခံနိုင် )တဲ့ဟာလေး တပ်ထားရပါတယ်။ အသံတွေကို မခံနိုင်ဖြစ်လာပြီလေ။ လူတွေ စကားပြောတာတောင် နားမထောင်ချင်တော့ဘူး။ ရှိရှိသမျှအသံကို နားထောင်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ကတိုတိုလာတယ်။ ဒီနားပိတ်တဲ့ဟာလေး တပ်လိုက်တော့ တော်တော်ကောင်းလာတယ်။ စကားပြောလို့ တော့မကောင်းဘူးပေါ့။
ဒီလောကကြီးမှာ ရှိနေသရွေ့ အသံနဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
Posted by လရိပ်အိမ် at 12:25 PM7comments:
အင်တာနက်ပြန်ရနေပါပြီ။ အိမ်လဲပြောင်းပြီးသွားပါပြီ။ ဦးလေးအိမ်မှာဘဲနေဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်ကို ၁လ ပြန်သွားဖြစ်ပါတယ်။ နေမကောင်းတော့စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှ မသွားနိုင်ပါဘူး။ ဆေးခန်းနဲ့အိမ်နဲ့ဘဲသွားဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ကလေးမွေးတာတောင်သွားမကြည့်ဖြစ်ဘူး။ ဒီ တခေါက်ရန်ကုန်ခရီးစဉ်က ဘာမှ ပျော်ရွှင်စရာ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ပဲခူးက ဆရာတော်ကြီးဆီကိုဘဲရောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်ရဆုံးသောအွန်လိုင်းက အကို တယောက်လဲ မေလထဲမှာ မင်္ဂလာဆောင်သွားပြီလို့ သတင်းကြားရပါတယ်။ ပျော်ရမလား ၊ ဝမ်းနဲရမလားမသိပါ။ ကိုယ်က သူ့ကို ချစ်နေတာကို။ တကယ်တော့ ဒီသတင်းက မြန်မာပြည်မပြန်ခင်ထဲက သိနေတာပါ။ အဲဒီတုန်းကလဲ ၁လလောက်ဝမ်းနဲလိုက်ရတယ်။ ခုရန်ကုန်ပြန်သွားတော့လဲ ထပ်ဝမ်းနဲတယ်။ သူက သိပ်နောက်တတ်တော့ ဒီသတင်းက တကယ်လား ၊ တကယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာ ကိုယ်လဲမသိဘူး။ သူ့သူငယ်ချင်းမေးကြည့်တော့ ကိုရီးယားမှာတုန်းကတော့ ဟုတ်တယ်တဲ့။ ခုရန်ကုန်မှာတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ သတင်းတွေက ဘာတွေလဲ မသိပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရှိသွားတော့ မလွမ်းသင့်တော့ဘူးမဟုတ်လား။
Posted by လရိပ်အိမ် at 6:51 PM5comments:
အိမ်ပြောင်းမည်ဖြစ်ပါ၍ အင်တာနက်နှင့် တခဏတာအဆက်အသွယ်ပြတ်နေပါအုန်းမယ်။
Posted by လရိပ်အိမ် at 3:49 PM4comments:
Posted by လရိပ်အိမ် at 5:49 PM 10 comments:
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ် တန်ခူးလဆုတ် ၁၁ရက် (မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့) မြန်မာပြည်မှ မြန်မာများအားလုံး၊ ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိကြသော မြန်မာများအားလုံး မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ... မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး နှစ်သစ်ကူးမှာ စိတ်၏ကျန်းမာခြင်း၊ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ၍ လိုအင်ဆန္ဒများတလုံးတ၀တည်းပြည့်ဝကြပါစေ... ဘေးဘယာကင်းကွာ၍ စီးပွားလာဘ်လာဘများဆထက်တပိုး တိုးပွားကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်....
Posted by လရိပ်အိမ် at 11:29 AM5comments:
Posted by လရိပ်အိမ် at 5:04 PM4comments:
I ကိုမုန်းတီးနေသူက ...... ဘယ်သူလဲ
တုံ့ပြန်လက်စားချေရက်တာ ...... ဘယ်သူလဲ
နှလုံးသားတံခါးကိုသော့ဖွင့်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာ ...... ဘယ်သူလဲ
Posted by လရိပ်အိမ် at 3:09 PM3comments:
သံစဉ်တွေရေး သီကျူးတတ်တဲ့ ငှက်ကလေး
မင်းကြောင့် အဝေးကို ထွက်ပြေးပျံသန်းခဲ့ရပြီ။
အရင် ဘလော့မှာတင်ထားဖူးတဲ့ဟာလေးပါ။ ဘလော့ပျက်သွားလို့ပြန်တင်တာပါ။
Posted by လရိပ်အိမ် at 11:34 AM4comments:
Posted by လရိပ်အိမ် at 11:04 AM6comments:
မွေးနေ့မှစ၍ ကျန်းမာခြင်း နှင့် လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ။
Posted by လရိပ်အိမ် at 5:17 PM5comments:
Happy Valentine For နှင်းဆီပွင့် တို့ရဲ့ သင်္ကေတ
ချစ်သူများနေ့ နီးလာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူ ကောင်မလေးတွေဆီ သို့မဟုတ် ကောင်လေးတွေဆီကို ချောကလက်တို့ ပန်းစည်းတို့ ပေးတတ်ကြပါတယ်. ချစ်သူများနေ့မှာ ပန်းစည်းတွေ ပေးကြတဲ့ အခါမှာ နှင်းဆီပွင့်လေး တွေကို ပေးတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ပေးတဲ့အခါ မှာ နှင်းဆီပွင့် ဘယ်နှစ်ပွင့် ပေးလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ် မှာ မူတည်ပြီး တော့ နှင်းဆီပွင့် တွေ ရဲ့အနက် အဓိပ္ပာယ် လေး တွေကို ဖွင့်တတ်ကြပါတယ်။ နှင်းဆီ တစ်ပွင့် စီ ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖော်ဆောင်မှု လေး တွေကို ရှာဖွေပြီးတော့ စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းများသို့ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နှင်းဆီ ၁ ပွင့် ………….ရင်ထဲမှာ မင်းပဲရှိတယ်
နှင်းဆီ ၂ ပွင့်……………ဒီကမ္ဘာမှာ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်တည်း
နှင်းဆီ ၃ ပွင့်……………မင်းကို ငါချစ်တယ်
နှင်းဆီ ၄ ပွင့်……………သေတောင်မခွဲဘူး
နှင်းဆီ ၅ ပွင့်……………တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတယ်
နှင်းဆီ ၆ ပွင့်……………တစ်ယောက်ကို တစ်ယောယက် လေးစားချစ်ခင် ခွင့်လွှတ်တယ်
နှင်းဆီ ၇ ပွင့်……………မင်းကို တိတ်တခိုးလေး ချစ်နေမယ်
နှင်းဆီ ၈ ပွင့်……………မင်းရဲ့ ကြင်နာမှုနဲ့ အားပေးမှု ကို ကျေးဇူးတင်တယ်
နှင်းဆီ ၉ ပွင့်……………အမြဲတမ်း
နှင်းဆီ ၁၀ ပွင့်………….အပြစ်ကင်းစင်သော ချစ်သူ
နှင်းဆီ ၁၁ ပွင့်………….မင်းတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ဂရုစိုက်တယ်
နှင်းဆီ ၁၂ ပွင့်………….တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးလို့ချစ်တယ်
နှင်းဆီ ၁၃ ပွင့်………….သူငယ်ချင်းအချစ်
နှင်းဆီ ၁၄ ပွင့်………….ဂုဏ်ယူပါတယ်
နှင်းဆီ ၁၅ ပွင့် ………....I’M SORRY! ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်မလား
နှင်းဆီ ၁၆ ပွင့်………….မတည်ငြိမ်သော အချစ်
နှင်းဆီ ၁၇ ပွင့်………….ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အချစ်
နှင်းဆီ ၁၈ ပွင့်………….ရိုးသားပွင့်လင်းခြင်း
နှင်းဆီ ၁၉ ပွင့်…………မျှော်လင့်စောင့်စားခြင်း
နှင်းဆီ ၂၀ ပွင့် ………...ငါ့မှာ ရိုးသားတဲ့ အချစ်တစ်ခုတည်း ရှိပါတယ်
နှင်းဆီ ၂၁ ပွင့်………….ရိုးသားတဲ့ အချစ်
နှင်းဆီ ၂၂ ပွင့်………….မင်းကံကောင်းပါစေ
နှင်းဆီ ၂၅ ပွင့်………….မင်း ပျော်ရွှင်ပါစေ
နှင်းဆီ ၃၀ ပွင့်…………..ဖူးစာကို ယုံတယ်
နှင်းဆီ ၃၆ ပွင့် ……….....Romantic
နှင်းဆီ ၅၀ ပွင့်…………...မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ကြတယ်
နှင်းဆီ ၉၉ ပွင့်…………...Forever!
နှင်းဆီ ၁၀၀ ပွင့်………….၁၀၀% အချစ်
နှင်းဆီ ၁၀၁ ပွင့်…………..အရမ်း….အရမ်း…..ချစ်
နှင်းဆီ ၁၀၈ ပွင့် ……….....လက်ထပ်ခွင့်ပေးပါ
နှင်းဆီ ၁၁၁ ပွင့်…………...အဆုံးမဲ့အချစ်
နှင်းဆီ ၁၄၄ ပွင့်…………...နေ့တိုင်း၊ လတိုင်း၊ အသက်ရှင်နေသရွေ့ မင်းကို ချစ်တယ်
နှင်းဆီ ၃၆၅ ပွင့်………...…နေ့တိုင်းလွမ်းတယ်
နှင်းဆီ ၉၉၉ ပွင့် ……….....မချုပ်ငြိမ်းတဲ့ အချစ်၊ အမြဲတမ်း ထာဝရ
နှင်းဆီ ၁၀၀၁ ပွင့်………….သက်ဆုံးထိတိုင် အချစ်မိုးတွေ သည်းနိုင်ကြပါစေ။
Posted by လရိပ်အိမ် at 10:40 AM5comments:
ဘလော့ကို တန်းပလိတ်တွေ ချိန်းလိုက်တာ ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိပါဘူး။ ခုအဲလိုဖြစ်သွားတာဘဲ.။ ရေးထားတာတွေ နှမြောစရာ :(
Posted by လရိပ်အိမ် at 6:18 PM4comments: